Xulka Tanzania oo 1:0 ku sogootiyey Xulka Somala ciyaar ka dhacey garoonka Nyayo ee Magaalada Nairobi – idalenews.com
Xulka Tanzania oo 1:0 ku sogootiyey Xulka Somala ciyaar ka dhacey garoonka Nyayo ee Magaalada Nairobi
Xulka qaranka Dalkeenna Soomaaliya ayaa galabta garoonka Nyayo National Stadium ee magaalada Nairobi kulan adag oo ka tirsan Group-ka B ee tartanka bariga iyo bartamaha Afrika kula yeelatay xulka Tanzania.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhammaatay goolal la’aan 0-0, waxaana kubad heysashada ku wanaagsanaa xuka qaranka dalkeenna Soomaaliya, fursaddii ugu wanaagsanayd waxay ahayd kubad uu soo qaaday Saadaq Balloteli, balse ay lumiyeen Soomaalidu.
Markii dib la isugu soo laabtay ayuu xulka Soomaaliya sii watay weerarka ay ku hayeen Tanzania, waxaa daqiiqadii 48-aad fusad gool oo filan kartay ka lumiyey Saadaq Balloteli.
Daqiiqadii 58-aad ee ciyaarta ayaa gool laga dhaliyey Soomaaliya waxaana shabaqa tagay xiddiga reer Tanzania ee CHANONGO, ciyaartana ka dhigay 1-0.
Macallinka xulka qaranka Soomaaliya Fara-yare ayaa bedel ku soo galiyey ciyaarta Maxamed Cabdi Nuur Maxamuud Meema waxaana lagu bedelay Xaayow.
Ciyaaryahankii bedelka ku soo galay Maxamed Meema ayaa lagu jilaafay diilinta ganaaxa kaddib kubad wanaagsan oo uu soo xirfadeeyey daqiiqadii 77-aad balse garsooraha ayaa diiday, sidaas ayaana Soomaaliya looga adkaaday 1-0, waana natiijo wanaagsan marka loo eego kulamadii ugu dambeeyey oo ay ciyaartay Soomaaliya.
Xiddigii Soomaaliya ay ku soo gashay garoonka iyo kuwii keydka ku jiray
La taliyihii Madaxweyne Xasan haddase ah howlwadeen ka shaqeeya xafiiska Nicholas Kay Mr. Nuuradiin Aadan Diiriye oo loo badinaayo inuu noqdo R/W Cusub ee Somalia